Buy Household wear at our shop Omyanmar
> Household wear
Showing 49 - 72 of 152 items
Hanging wardrobe with swing door – High ချိတ်ဆွဲထားနိုင်သည့် လွှဲတံခါးနှင့်အ၀တ်အစားဗီရို – အမြင့် Size: W40 x D35 x H80 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၄၀၊ အနံ ၃၅၊ အမြင့် ၈၀ စင်တီမီတာ
Hanging wardrobe with swing door – Wide ချိတ်ဆွဲထားနိုင်သည့် လွှဲတံခါးနှင့်အ၀တ်အစားဗီရို – အကျယ် Size: W80 x D35 x H40 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၈၀၊ အနံ ၃၅၊ အမြင့် ၄၀ စင်တီမီတာ
W46.6 * D30 * H200 cm
PUNTO Living room Table with case Size: W60*D40*H40 cm. consists of; Table with shelf (PT-60) Top case (PTC-60)
PUNTO Living room Table with case Size: W90*D40*H40 cm. consists of; Table with shelf (PT-90) Top case (PTC-90)
Ks 399,000 Ks 429,000 -Ks 30,000
ဘေးဆွဲကြည့်မှန်တံခါး အ၀တ်အစားဗီရိုဖြစ်ပြီး၊ အတွင်း၌ အ၀တ်ချိတ်တန်း ၃ ခုနှင့် အကန့် ၄ ခုပါဝင်သည်။
Ks 419,000 Ks 451,000 -Ks 32,000
Kurve – short cutty stool with 1 drawer and castors or rubber legs (including cushion) Kurve – ထိုင်ခုံအပုဖြစ်သည်။ အံဆွဲ (၁)ခုနှင့် ဘီး (သို့မဟုတ်) ရာဘာခြေနှင့်ဖြစ်သည်။ (ကူရှင်ပါဝင်သည်။) Size: W44*D40.7*H44 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၄၄၊ အနံ ၄၀.၇၊ အမြင့် ၄၄ စင်တီမီတာ
Kurve – Long stool with 1 drawer and castors or rubber legs ( including cushion) Kurve – ထိုင်ခုံအရှည်ဖြစ်သည်။ အံဆွဲ (၁)ခုနှင့် ဘီး (သို့မဟုတ်) ရာဘာခြေနှင့်ဖြစ်သည်။ (ကူရှင်ပါဝင်သည်။) Size: W88*D40.7*H44 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၈၈၊ အနံ ၄၀.၇၊ အမြင့် ၄၄ စင်တီမီတာ
Kurve –2drawers side desk with castors or rubber legs Kurve – အံဆွဲ (၂)ခုနှင့် ဘေးတွဲခုံဖြစ်သည်။ ဘီးများ (သို့မဟုတ်) ရာဘာခြေများပါဝင်သည်။ Size: W44*D40.7*H76 cm.
Kurve – Long side desk with castors or rubber legs Kurve – ဘေးတွဲစားပွဲခုံအရှည်ဖြစ်သည်။ ဘီးများ (သို့မဟုတ်) ရာဘာခြေများပါဝင်သည်။ Size: W88*D40.7*H76 cm.
Kurve – TV cabinet with3drawers and shelf Kurve – အံဆွဲ (၃)ခုနှင့် စင်ပါသော TV စင်ဖြစ်သည်။ Size: W133*D40.7*H53 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၁၃၃၊ အနံ ၄၀.၇၊ အမြင့် ၅၃ စင်တီမီတာ
2 DOOR HEIGHT,5SHELVES
Height open steel door cupboard with5adjustable shelves and graphic available. နှစ်ဖက်ဖွင့်စတီးတံခါးနှင့် ဗီရိုဖြစ်သည်။ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော စင်(၅)စင်ပါဝင်ပြီး၊ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းနှင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။